Umgomo Wobumfihlo - Amaphakethe weBeroean - Isibuyekezo seWebhu.org
Ikheli lewebhusayithi yethu lithi: https://beroeans.net.
Le nqubomgomo yobumfihlo ("Inqubomgomo") kanye Nemigomo Yesevisi yalesi siza (ndawonye "Nemibandela") ilawula konke ukusetshenziswa kwe-https: //beroeans.net nezinsizakalo zaleyo sayithi (ndawonye "Indawo" noma "Izinsizakalo"). Abanikazi kanye nabanikeli kulesi Sayithi bazobizwa ngokuthi “thina,” “thina,” noma “bethu” kule Nqubomgomo. Ngokusebenzisa isiza noma izinsizakalo zawo, kanye / noma ngokuchofoza noma kukuphi kule sayithi ukuze uvume imigomo nale nqubomgomo, uthathwa ngokuthi "ungumsebenzisi" ngezinhloso zale Nqubomgomo. Wena nawo wonke omunye umsebenzisi (“wena” noma “Umsebenzisi” njengoba kusebenza) ungaphansi kwale Nqubomgomo. Wena nomsebenzisi ngamunye nathi siyavuma imigomo ngokusebenzisa izinsizakalo. Kule Migomo, igama elithi "Isayithi" lifaka phakathi isiza esikhonjwe ngenhla, umnikazi waso, abanikeli, abahlinzeki, abanikezeli belayisense namanye amaqembu ahlobene nawo. Ngokusebenzisa isayithi lethu, uvumela inqubomgomo yethu yobumfihlo.
Uma kucelwe, Abasebenzisi kufanele bahlinzeke ikheli le-imeyili elivumelekile kwiSayithi, lapho uMsebenzisi angathola khona imiyalezo. Umsebenzisi kufanele avuselele isayithi uma lelo kheli le-imeyili lishintsha. Isiza sinelungelo lokuqeda noma iyiphi i-akhawunti yomsebenzisi uma i-imeyili evumelekile iceliwe kepha inganikezwa uMsebenzisi.
Uma isiza sikhuthaza noma sivumela umsebenzisi ukuthi enze igama lomsebenzisi noma iphrofayili, Abasebenzisi bayavuma ukungakhethi igama lomsebenzisi noma banikeze noma yiluphi ulwazi lwephrofayili olungeza umuntu ongeyena noma olungadala ukudideka nanoma yimuphi omunye umuntu noma ibhizinisi. Isiza sigcina ilungelo lokukhansela i-akhawunti yoMsebenzisi noma siguqule igama lomsebenzisi noma idatha yephrofayili nganoma isiphi isikhathi. Ngokufanayo, uma isiza sikhuthaza noma sivumela uMsebenzisi ukuthi enze i-avatar noma alayishe isithombe, uMsebenzisi uyavuma ukungasebenzisi siphi isithombe esilingisa omunye umuntu noma inhlangano, noma okungenzeka sidale ukudideka.
Unesibopho sokuvikela igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi yeSayithi, futhi uyavuma ukungayivezi kunoma yimuphi umuntu wesithathu. Sincoma ukuthi usebenzise iphasiwedi engaphezulu kwezinhlamvu eziyisishiyagalombili. Unesibopho sawo wonke umsebenzi ku-akhawunti yakho, noma ngabe uwugunyaze noma cha. Uyavuma ukusazisa ngokusetshenziswa okungagunyaziwe kwe-akhawunti yakho, ngo uxhumane nathi. Uyavuma ukuthi uma ufisa ukuvikela ukusebenzisana kwakho neSayithi, kungumthwalo wakho wemfanelo ukusebenzisa ukuxhumana okuvikelekile, inethiwekhi yangasese ebonakalayo, noma ezinye izindlela ezifanele.
Sivikela idatha yakho nge-SSL engapheli ukubethela
Singathola idatha engakhombisi uqobo ngama-analytics e-Google noma amanye amafemu wokuhlaziya abavakashi.
Akunandaba noma yini engahle ihambisane nokuhlinzekwa kwe- "Disputes" ngenhla, zonke izindaba, kanye nazo zonke izimangalo zodaba lwezicelo eziningi, ezingenakuphikiswa, kufaka phakathi zonke izimangalo ngomonakalo wezezimali, zizonqunywa ngumxazululi oyedwa okhethwe yithi , ozobamba amacala enkantolo noma eduzane naseMelika, eMelika, ngaphansi kwemithetho ye-American Arbitration Association.
Sizinze eMichigan, e-USA futhi unenkontileka yokusebenzisa iSayithi lethu. Le Nqubomgomo kanye nazo zonke izindaba ezivela ekusebenziseni kwakho iSayithi kulawulwa yi-futhi kuzoqanjwa ngokuya ngemithetho yaseMichigan, e-USA, ngaphandle kokubheka noma yimiphi imithetho yemithetho yanoma yiliphi igunya. Izinkantolo zombuso nezinkantolo zombuso ezinamandla okuma ezwe ngezimpikiswano ezivela endaweni yethu esehhovisi eMichigan, e-USA kuzoba ukuphela kwezindawo ezivumelekile zazo zonke izingxabano ezivela noma ezihlobene nale Nqubomgomo noma iSayithi neNkonzo.
Uma unemibuzo mayelana nalemigomo, sicela usebenzise i-
Le migomo yagcina ukuvuselelwa ngomhla ka- August 22, 2018